Blockchain Observatory iyo Forum keena EU in "Safka hore" ee Blockchain Tech - Blockchain News
Blockchain Observatory iyo Forum keena EU in "Safka hore" ee Blockchain Tech
Bilowday EU Blockchain Observatory la Ethereum xawaaladaha
ConsenSys, mid ka mid ah GOORMUU ugu caansan ee deegaanka ethereum ah, Guddiga Yurub u shaqayn doono ay Blockchain Observatory EU iyo Forum, kaas oo si rasmi ah bilaabay Khamiistii.
The dadaali laba sano kor u maalgelin doonaa in 340 million € ($425 million) mashaariicda blockchain. Guddiga ayaa marka hore ku dhawaaqay qorshe uu guga ee la soo dhaafay, xiganaya ay jecel yihiin in ay balaadhiyaan aqoonta hay'adaha of blockchain iyo teknoolajiyada ledgerka qaybiyey.
“Sida actor muhiim ah in bulshada blockchain, ConsenSys soo dejin doonaa go'an xoog leh blockchain horumarinta, khibrad adag oo xidhiidh la hannaanka caalamiga ah ee blockchain, iyo hab ganacsi si ay u galaan la daneeyayaasha iyo khubarada ee Midowga Yurub iyo adduunka oo dhan,” EC ayaa sheegay Khamiistii in war qoraal ah oo daaha ka xubinimadii.
ConsenSys, caalami ah “studio-soo-saarka hawgal” in uu yeesho software ugu horayn loogu talagalay blockchain ethereum ah, waxaa la aasaasay by Yuusuf Lubin, kii CoinDesk ka qortay ay ugu saameynta badan ee Blockchain 2017 taxane.
The Commission ee lagu dhawaaqay si gaar ah carrabka ku adkeeyay in ay jecel yihiin in la abaabulo blockchain ah faa'iido u ah suuqa hal Yurub, oo sheegay in ujeedada koowaad ee Observatory iyo Forum waa in lagu dhiso mashaariic jira si loo hubiyo in ay ka shaqeeyaan xuduudaha.
Guddiga Dhaqaalaha Digital iyo Society Mariya Gabriel hadashay:
“Waxaan arki blockchain sida baddali kulan, waxaana doonayaa Europe in ay safka hore ee ay horumarinta. Waxaan u baahanahay in la dhiso jawi saxda ah awood - a Digital Single Market for blockchain si markaa dhammaan muwaaddiniinta ay ka faa'iideysan karaan, halkii ay kala qoqobo hawlgaladii. The Blockchain Observatory EU iyo Forum waa talaabo muhiim ah in jihada in.”
Valdis Dombrovskis, Madaxweyne ku xigeenka EC mas'uul ka ah xasiloonida dhaqaale, adeegyada maaliyadeed iyo Capital Suuqyada Union, ka mid ah mashaariicda kale, ayaa hore uga hadashay danta EU ee technology blockchain, ayaa sheegay in Observatory ayaa sidoo kale ku hanuunin doonaa siyaasad EU.
Waxa uu ammaanay fikradda ah technology blockchain, oo wuxuu ku yidhi “ka mid ah farsamooyinka badan oo halabuurka digital, blockchain leeyahay awooda uu ku noqon dhab ah badalka adeegyada maaliyadeed iyo suuqyada.
Sababo la launc ah ...
version cusub ee Seeraar Core si buuxda u taageersan SegWit-cinwaanada
Softfork SeqWit qaaday ...
Post Previous:UPS gudbiyo patent inay aqbalaan Seeraar for lookarrada
Post Next:Khasaaraha Rug Double xaaq Market Crypto Hantida